WR EFT kugula ats Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
WR EFT kugula
Kunzima ukufumana i-Escape ethembekileyo kwi-Tarkov cheat, ngakumbi enye ebandakanya ezi zinto zininzi. Zenzele inceba kwaye ujoyine i-GamePron namhlanje.
Ukufumana ukufikelela kwinethiwekhi yokukhula ngokukhawuleza ekhula ngokukhawuleza efumaneka kwi-Intanethi-Thenga iMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Abanye bayabhabha, emva koko abanye balawule-Thenga i-1 yeveki yeMveliso ephambili namhlanje
Kutheni le nto ungafuni ukuzibophelela kwiindlela zokugenca? Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Nje ukuba uthenge isitshixo semveliso, uya kubona ukuba kutheni uninzi lwabasebenzisi beMidlaloPron bethetha ngokukhohlisa kwe-EFT WR.
Ulwazi lwe-EFT WR lokuKhangela
Ukubaleka eTarkov ayingomdlalo oza kukuvumela ukuba ungene kwaye uphumelele kwangoko ngaphandle kokuba ufumene "uncedo" oluncinci lokuba ubuyele kulo. Ukusebenzisa i-EFT WR ye-hack yethu akuyi kuqinisekisa nje ukuba uphumelele, kodwa kuyisixhobo esilula kakhulu ukuyisebenzisa. Kuphuhlisiwe Windows 10, oku kubaleka kwiTarkov hack kuza ngesiNgesi kwaye kuxhasa ii-Intel / AMD CPUs. Ayizi nge-HWID spoofer, kodwa unokuhlala uthenga enye (ngeendleko ezongezelelweyo) kuthi apha kwi-GamePron. Zonke izinto ozifunayo xa ubaleka iTarkov zizinto ekungasoloko kulula ukuzifumana!
I-EFT WR ye-hack yethu inikezela nge-Enemy ESP, kunye ne-EFT Aimbot ebandakanya i-FOV Circle kunye ne-Smooth Aiming. I-Radar, Ubusuku / Umbono weThermal, kunye neMoor yeVisor ayinakufumaneka nakokukhohlisa.
Utshaba ESP (ithambo)
Ulwazi lutshaba (igama, impilo, ukujonga iqela, inqanaba, pmc, iziqhushumbisi)
Malunga ne-EFT WR
Ubuqhetseba abuzukuphambanisa nangaliphi na ixesha, njengoko ubuya kuba njalo xa uzama ukufaka ezinye iindlela ze-EFT. Into ekufuneka uyenzile kukurejista kwi-loader kwaye ulandele indlela "yokusebenzisa" incwadi yemiyalelo eza nokukhohlisa! Ikwangumboniso wobungqina, ngenxa yoko ungathatha "iitalente" zakho kwinkonzo yokusasaza bukhoma njengeTwitch kwaye ubonise abantu ukuba ungubani kanye kanye. Sukuba nexhala, ngekhe bakwazi ukubona iihacks! Unokonwabela imidlalo yakho kwimowudi esigcweleyo ngelixa usebenzisa i-EFT WR hack.
Kutheni usebenzisa i-EFT WR ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ukuba ukhe wasebenzisa abanye ababhekisi phambili okanye ababoneleli ngaphambili, uyazi ukuba kunokuba kubi kangakanani ukujongana nabo. Ayisiyo kuphela ukubonelela ngenkonzo yobuchwephesha apha, kodwa sihlala sizama ukuphucula iihacks zethu. Ukuhlaziywa rhoqo kunye nokuphuhliswa kwezixhobo zemidlalo ezinye iinkampani ezingayi kuzikhathaza ngazo yeyona nto isenza ukuba sithandwe kangaka! Ukuba ufuna i-Escape ekumgangatho ophakamileyo kwiiTarkov hacks ngaphandle "kwamafutha", uzifumene. Izixhobo zethu zikhuselekile kwi-100% kwaye ziya kukugcina uzifihlile kwinkonzo yokufumanisa ubuchwephesha, ngenxa yoko akukho sidingo sabasebenzisi beMidlaloPron sokukhathazeka malunga nokuvalwa.
Usenokuba ulivile igama elithi "toggling" ngaxa lithile elidlulileyo, kodwa kuhlala kukho umntu omtsha ongazi ukuba kuthetha ntoni oko. Imenyu yomdlalo ongaphakathi kumdlalo ibandakanyiwe ngaphakathi kukhetho lwethu lwe-EFT WR ekuvumela ukuba uhlengahlengise useto lokuqhekeka nangaliphi na ixesha ongathanda ngalo, elingenakuthethwa kwezinye i-Escape ethandwayo evela kwiTarkov cheats efumaneka kwi-Intanethi. Ukuhlengahlengisa ukuba i-aimbot yakho iphendula ngokukhawuleza njani kwiintshaba kulula, kwaye unokutshintsha ubungakanani beSangqa sakho se-FOV ukuze ijolise kwiintshaba ezimbalwa. Awusoloko ufuna ukuba izicwangciso zakho zimpontshelwe phezulu, kwaye sinokunceda ukufezekisa ezo zicwangciso.
Abanye ababoneleli bokukopela baya kuthi bakhuphe izixhobo ezingakulungelanga ukuthengisa. Kwi-GamePron, uya kuhlala ufumana ukufikelela kwi-EFT cheats ethembekileyo! Thenga isitshixo semveliso namhlanje ukuze uqalise.
Ilindelwe Lawula kunye ne-EFT WR Hack yethu?